धेरै नै रिसाउँछन् यी ४ राशि हुनेहरु, यिनीसँग रहनुस् सावधान ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/धेरै नै रिसाउँछन् यी ४ राशि हुनेहरु, यिनीसँग रहनुस् सावधान !
धेरै नै रिसाउँछन् यी ४ राशि हुनेहरु, यिनीसँग रहनुस् सावधान !
हरेक मानिसको व्यवहार फरक-फरक हुने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार हेरक राशिको व्यवहार फरक हुने कुरा बताउने गर्छ। केहि व्यक्ति हरेक कार्यमा छिट्टै प्रतिक्रिया दिने गर्छन् भने केहि चाहिं हत्त-पत्त प्रतिक्रिया नजनाउने गर्छन्। बुझ्दै नबुझी प्रतिक्रिया दिने बानि धेरै गलत परिणामको बाटो बन्न सक्छ। यस्तै ज्योतिष शास्त्र अनुसार केहि राशिहरु रिसाउने मामलामा धेरै अगाडी हुने गर्छन्। आज गामी यस लेखमा सबै भन्दा धेरै रिसाउने राशिहरुको बारेमा बताउने छौँ।
खासै नरिसाउने यस राशिक मानिसहरु रिसाएको समयमा भने धेरैनै क्रोधित हुने गर्छन्। क्रोधित भएको समयमा मेष राशिहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न धेरैनै गार्हो हुने गर्छ। आफ्नो अपमान भएको अवस्थामा मेष राशि भएका व्यक्तिहरु हिंसक पनि हुने गर्छन्।
यस राशि भएका व्यक्ति प्राकृतिक रुपमानै क्रोधको पर्याय मानिने गर्छन्। धेरै रिसाउने हुँदा यस राशि हुने व्यक्तिहरु आफुलाई रिस उठेको समयमा एक्लै बस्न खोज्ने गर्छन्। छिट्टै रिसाउने बानि भएका कारण सिंह राशि हुनेहरुलाई मजाक गरेको पनि मन नपर्ने गर्छ।
वास्तविक रुपमानै क्रोधित भएको अवस्थामा यस राशि भएका मानिसहरु धेरै असामान्य देखिने गर्छन्। आफ्नो अपमान अवस्थामा धेरनै रिसाउने गर्छन्। छिट्टै नरिसाउने भएता पनि रिसाएको खण्डमा बहने धनु राशि हुनेहरुलाई नियन्त्रण गर्न भने धेरै गार्हो हुने गर्छ।
धेरै क्रोधित देखिने यस राशिका मानिसहरु प्राय सानो-सानी कुरामा पनि रिसाउने गर्छन्। रिसको सिमा पार भएको अवस्थामा धेरै हानी पुर्याउन पनि पछि नपर्ने यस राशिका व्यक्तिहरुसँग व्यवहार गर्दा धेरै संयमित हुनु पर्ने हुन्छ।
बच्चा जन्माउँन नसकेको भन्दै नेपाली सेनामा कार्यकर्त प्रतापले या’तना दिदा ज्यान फालिन आशाले !